ကော်လံ - မကြာသေးမီက LEGO ဖြစ်သည် Ideas set တွေကအရမ်းဈေးကြီးနေလား။
16 / 09 / 2021 14 / 10 / 2021 ခရစ် Wharfe 202 Views စာ 1 မှတ်ချက် 21314 TRON: အမွေ, 21321 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာကာသစခန်း, 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြ, ၂၁၃၂၃ Grand Piano, ၂၁၃၂၆ Winnie the Pooh, 21327 လက်နှိပ်စက်, ၂၁၃၂၈ Seinfeld, ၂၁၃၂၉ Fender Stratocaster, 92177 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော, ကြောကျတိုငျ, Guillaume Roussel, အိမ်မှာတစ်ယောက်တည်း, Ideas, Lego, Lego Ideas, Lego Ideas ပြိုင်ပွဲ, Lego Ideas စီမံကိန်းများ, မော်နီကာ Pedersen, မော်တော်မီးပြတိုက်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားမှဂီတ, သဘော, စန်ဒရို Quattrini, E သည်artဇကမ္ဘာလုံး, အဆိုပါ LEGO Group, Truman Cheng ပါ, Vincent van Gogh: ကြယ်ကြယ်
As ၂၁၃၂၉ Fender Stratocaster p ကိုတက်သည်art Tomáš Letenay ရဲ့မူလဒီဇိုင်းအရေအတွက်ကိုငါတို့ကျန်တာမေးမယ်၊ ဘယ်တော့ဖြစ်မလဲ Lego Ideas ဘတ်ဂျက်သေးသေးလေးတွေကိုထပ်ပြီးဝန်ဆောင်မှုပေးမလား။
၏ Lego Ideas လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်အတွင်းဖြန့်ချိခဲ့သောအင်္ကျီများသည် UK ၌ပေါင် ၁၀၀ အောက်၌ ၄ ခုသာရှိသည်။ 21321 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာကာသစခန်း, ၂၁၃၂၆ Winnie the Pooh, ၂၁၃၂၈ Seinfeld နှင့် 92177 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘောမရ။ စျေးအသက်သာဆုံးမှာ ၆၄.၉၉ ပေါင်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့အနက်မှတစ်ခုသည်£ ၈၉.၉၉ နှင့်ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိနေပြီးအခြားတစ်ခုသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက်ပြန်လည်ဖြန့်ချိသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
၂၀၂၀ နှင့် ၂၀၂၁ တွင်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည့်အခြား crowdsourced အစုံတိုင်းသည်သုံးဆပိုတောင်းသောစျေးထက်ကျော်လွန်ပြီးပေါင် ၃၁၉.၉၉ ဖြင့်ကျော်လွန်ခဲ့သည်။ ၂၁၃၂၃ Grand Pianoမရ။ မည်သူမဆိုပြီးပြည့်စုံသောစုဆောင်းမှုအတွက်လှော်ခတ်နေသူဖြစ်သည် Lego Ideas sets since the ISS will have had to part မျက်စပစ်ရန် ၁၃၃၀ ပေါင် (ဘယ်သူမဆိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်သင့်တာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါနောက်မှလာခဲ့မယ်။ )
ဒါဆိုဘာကြောင့်ကြီးမားတဲ့ကြီးမားတဲ့ဘက်ကို ဦး တည်သွားတာလဲ Ideas အစုံ? ဟိ Lego Group က ကပြောပါတယ် ၎င်းသည် 'ရပ်ရွာ၏အော်ဂဲနစ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ပလက်ဖောင်း' ကိုလိုက်နာသည်၊ ၎င်းသည်သိသာထင်ရှားသည့် 'ကြီးမားသောအစုံများဆီသို့ ဦး တည်သောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခု' ဖြစ်သည်။ Lego Group ၏အကြီးတန်းစျေးကွက်မန်နေဂျာ Monica Pedersen ဒါပေမယ့်အဲဒါကတကယ်ရှင်းပြတာမဟုတ်ဘူး ၂၁၃၂၉ Fender Stratocaster.
မှနှုတ်ယူသည် ဆန်ကာတင် မနှစ်က 'Music to our Ears' သီချင်း Lego Ideas ပြိုင်ပွဲ၊ Tomáš Letenay ၏မူလတင်ပြချက်သည်နောက်ဆုံးပုံစံတွင်သင်မြင်သမျှအရာအားလုံးကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဂစ်တာ၊ အမ်ပီယာ၊ ခြေနင်းနှင့်သံကြိုးများအားလုံးကိုအတူတကွချိတ်ဆက်ရန်။ သို့သော်ထိုအဆောက်အအုံများသည်စုပေါင်း ၆၇၆ အပိုင်းအစတွင်ပါ ၀ င်သည်။
မင်း set ကိုမတည်ဆောက်ခဲ့ရင်တောင်အဲဒီ p တွေထပ်ထည့်ထားတဲ့တရားဝင်ပုံတွေကချက်ချင်းရှင်းပါတယ်artPrinceton Reverb amp တွင်အသေးစိတ် (ဒါပေမယ့်အများစုဖုံးကွယ်ထားသော) အတွင်းပိုင်းကိုထည့်ပါ။ ဒုတိယအချက်မှာ Fender ဂစ်တာအတွက်ကွဲပြားသောအရောင်ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းခြင်းဖြစ်သည်။
အသေးစိတ်အချက်များနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းများသည်မည်သည့်အရာကိုမဆိုရှာဖွေရန်ခိုင်မာသောစရိုက်များဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ပြသနာများမဟုတ်ချေ Lego ထုတ်ကုန်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့ထည့်သွင်းမှုရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကတော့ပေါင် ၁၀၀ အမှတ်အသားကိုတစ်ဖန်ခေါက်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်မင်းကိုပိုလိုချင်တာပဲ။ Lego Letanay ၏ဒီဇိုင်းကိုရိုးရှင်းစွာအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခြင်းထက်ဘတ်ဂျက်ပိုရနိုင်သည်။
ငါဒီအက်ပလီကေးရှင်းကိုဖောက်ထွင်းခဲ့ရင် ယခုလအစောပိုင်းက ရိုးရှင်းသော amp တစ်ခုနှင့်အနီရောင်ဂစ်တာတစ်လုံးကိုတည်ဆောက်ရန်ငါဖြစ်ခဲ့သောအရာကိုကျွန်ုပ်အထင်ကြီးလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ကဲ့သို့၊ အခြား Strat ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အမည်းရောင်အပိုင်းအစများသည်ကျွန်ုပ်၏ပိုကျယ်သော p ထဲသို့ခေါက်ထားသည်art စုဆောင်းခြင်း၊ amp ၏စင်ပေါ်တွင်ထိုင်ခြင်း၊ ၎င်း၏ပတ်လမ်းနှင့်စပီကာကိုလုံးဝဝှက်ထားသည်။
ပို၍ ပို၍ သော်လည်းကောင်း၊ ရပ်ရွာလူထု၏အော်ဂဲနစ်လှုပ်ရှားမှုနောက်သို့ လိုက်၍ ပိုပိုက်ဆံအိတ်နှင့်လိုက်ဖက်ညီသော set ဖြစ်နိုင်သည်ဟူသောအရာအရေအတွက် (နှင့်စျေးနှုန်း) ကိုတက်စေသည်။ တကယ်မဟုတ်ဘူး - ဒါပေမယ့်၊ ၂၁၃၂၉ Fender Stratocaster နည်းပညာအရရပ်ရွာကရွေးချယ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ ဟိ Lego Ideas တရားသူကြီးများက 'Music to our Ears' ပြိုင်ပွဲ ၀ င်စာရင်းများမှ၎င်းကိုရွေး။ ၎င်းအားသူတို့၏နောက်ဆုံးဆန်ကာတင် ၉ ဦး မှအနာဂတ်အဖြစ်ရွေးချယ်သည်။ Ideas အစုံ
တကယ်တော့အဲဒါကအဲဒါကိုပထမဆုံးလုပ်တာပဲ Lego Ideas အသိုင်းအဝိုင်းမှကြီးကြီးမားမားပံ့ပိုးမှုမရှိသော်လည်းစင်ပေါ်သို့တက်ရန်သတ်မှတ်ထားသည်။ (နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်သာစီမံခဲ့သည် သတ္တမနေရာ ပရိသတ်ရဲ့မဲစစ်တမ်းမှာ ၄၂၇ မဲသာရှိသည်။ ) ထို့ကြောင့်လုံလောက်သည်၊ အသိုင်းအဝိုင်းသည်ပိုကြီးပြီးပိုကောင်းသောအစုံများကိုတက်တက်ကြွကြွရှာဖွေနေသည်ဟူသောသဘောတရားနှင့်မလုံလောက်ပါ။
ဒါပေမယ့်အများကြီးပိုသေးပါတယ် Lego Ideas ပရောဂျက်များသည်လည်း ၁၀K အထိဖြစ်စေသည်။ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာအပါအ ၀ င်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအဆင့်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါပြီ စံချိန်တင် - ၂၀၂၀ ပထမ ၂၀၂၁ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတွင် ဒါပေမယ့် Lego BrickLink Designer Program တွင်တွေ့ခဲ့ရသည့်အချို့သောသေးငယ်သည့်တင်ပြချက်များကိုငြင်းပယ်ပြီးအုပ်စုငယ်များကိုတရားဝင်အစုအဖွဲ့များအဖြစ်သာရွေးချယ်သည်။
ဤနှုန်းနှင့်ပမာဏတွင် (မဟုတ်ပါ Lego Ideas ၂၀၁၈ ခုနှစ်ရဲ့ ၂၁၃၁၄ TRON: Legacy မှ စ၍ ပေါင် ၅၀ ထက်နည်းလာသည် Ideas အစုလိုက်အပြုံလိုက်တဖြည်းဖြည်းတိုးလာသည်) မည်သူမဆိုဆက်လက်စောင့်မျှော်ရန်မည်သို့ဖြစ်နိုင်သနည်း။ ရိုးရှင်းသောအဖြေမှာသင် ၀ ယ်စရာမလိုပါ တိုင်း Lego Ideas သတ်မှတ် ပလက်ဖောင်းတစ်ခုလုံး၏တွန်းအားသည်အကြောင်းအရာမျိုးစုံ၊ စကေး (သို့) အာရုံစူးစိုက်မှုတို့တွင်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူညီသောအစုံများစွာထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်လည်းလူတွေဟာတန်းတူရည်တူအကျိုးစီးပွားတွေကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရှိဖို့၊ ဖြစ်နိုင်တာတစ်ခုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီကြဘူး Ideas သင်၏မျက်စိကိုဖမ်းရန်အစုံ ငါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကငါဒီနှစ်ခုကိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီ - 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြ, 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ - ဒါပေမယ့်ဘတ်ဂျက်အကြောင်းအရင်းသက်သက်ကြောင့်အခြားသူတွေကိုချော်လဲစေခဲ့တယ်။
ငါစိတ်ဝင်စားခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ် ၂၁၃၂၃ Grand Pianoဥပမာ၊ ဒါပေမယ့်ငါ့မှာစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတဆင့်သူ့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုအမှန်တကယ်သတ်မှတ်ပေးတဲ့အရံအတွက်ပေါင် ၃၂၀ လောက်အပိုမရှိဘူး။ ဒီလိုပဲ၊ 21327 လက်နှိပ်စက် စားပွဲတင်အသုံးအဆောင်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်ပေါင် ၁၈၀ လောက်နဲ့ရမယ်လို့ငါတကယ်မမျှော်လင့်ခဲ့ဘူး။
ဤကော်လံ၏အဓိကအချက်သည်အခြေခံအားဖြင့်ကျသည် Lego Ideas သတ်မှတ်? မီးစိမ်းပေးထားပြီးသားစီမံကိန်းတွေကနေလာမယ့်အရာတွေကိုကြည့်ပြီးမကြာခင်မှာဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူး။
Sonic Mania ဖြစ်သည် ကောလဟာလသတင်းများအရ ပေါင် ၆၉.၉၉ နှင့်အနီးဆုံးရောက်ရန်၊ နောက်ဆုံးပေါ်အစီရင်ခံစာများ မျက်စောင်းထိုးအိမ်တွင်တစ်ယောက်တည်းဒေါ်လာ ၂၅၀ ။ Guillaume Roussel ၏ Earth ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတင်ပြမှုတွင်အပိုင်း ၂,၀၆၀ ပါ ၀ င်သည်၊ ထို့ကြောင့်စျေးနှုန်းကျဆင်းစေရန်အချို့ (ကြီးကြီးမားမားနှင့်မလိုအပ်သောနှစ်ခုလုံး) ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ Truman Cheng သည်အုတ်ခဲပေါင်း ၁,၅၅၂ ကိုသုံးပြီး Vincent van Gogh ကဲ့သို့ The Starry Night ကဲ့သို့ The Starry Night ကိုအသက်ပြန်ရှင်စေခဲ့သည်။
Sandro Quattrini's သည် ပို၍ နိမ့်သည် မော်တော်မီးပြတိုက် မူလအယူအဆကိုထင်ဟပ်စေသောအပိုင်းအစများနှင့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းထောင်ပေါင်းများစွာလိုအပ်သောကြောင့်ဘဏ်ကိုထပ်မံချိုးပစ်ဖွယ်ရှိသည်။ ဤအစုများအားလုံးသည်တောက်ပသောအပိုပစ္စည်းများဖြစ်လိမ့်မည်မှာသေချာသည် Ideas ဒီဇိုင်းဆွဲသူတွေကသူတို့ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါတွေအားလုံးအရမ်းစျေးကြီးလာတဲ့အခါအဲဒါကိုပြသနာကအမှန်ဘဲ။
ကြီးကြီးမားမားမှာဘာအမှားမှမရှိပါဘူး Lego အစုံ၊ အနည်းဆုံးစျေးကွက်ပြည့်ဝမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မရေရာသောစိုးရိမ်မှုများထက်ကျော်လွန်နေသည် (စartအခြားအကြောင်းအရာများကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းစင်ပေါ်သို့တင်နေသောကြီးမားသောထုတ်ကုန်များကို icularly စဉ်းစားသည်) ၎င်းအရာအားလုံးကို ၀ ယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုမည်သူမျှမခံစားသင့်ပါ Lego အဖွဲ့ကထုတ်တယ်။
ငါဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့အဖြေကအစုံကိုတကယ်ပြန်မဆွဲဘူး Ideas မီးစိမ်းကိုပေးထားပြီးသားပါ၊ ဒါကစျေးနှုန်းရဲ့အောက်ခြေမှာငါတို့ကိုပိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးတယ်၊ အဲဒါကြောင့်ထပ်ကျွေးတယ်။ Ideas တစ်ချိန်ကလုပ်ခဲ့သည် - ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည် Lego ဘတ်ဂျက်။
← LEGO သည်၎င်း၏ Super Mario 64 set ၏အကောင်းဆုံး features များထဲမှတစ်ခုကိုဖုံးကွယ်ထားသည်
ကျောင်းသားများသည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုရွှေ့ရန် LEGO Technic ကိုသုံးသည် →
တစ်ခုမှာ "Lego ဖြစ်ကြသည် Ideas set တွေကအရမ်းဈေးကြီးနေလား။"
ငါသူတို့ရဲ့လက်ရှိ ဦး တည်ချက်ကိုအပြည့်အဝမရပ်ဘူး။ သူတို့ကမတူညီတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးတွေကိုမေတ္တာရပ်ခံချင်ပေမယ့်အဆောက်အအုံတွေဆောက်ချင်တယ်။ စူပါဟီးရိုးမဟုတ်၊ လက်နှိပ်စက်လည်းမဟုတ်၊ ပန်းအတုလည်းမဟုတ်၊ အဆောက်အ ဦး လည်းမဟုတ်။
ငါအခြားအရွယ်ရောက်ပြီးသူ lego ဆောက်သူများနှင့်စကားစမြည်ပြောပြီးသူတို့ကလက်ရှိအစုံကိုလည်းမကြိုက်ဘူး။ ငါ lego ၀ ယ်တာနောက်ဆုံးအကြိမ်ကသူတို့က modular ရဲစခန်းမှာထွက်လိုက်တာ။ တကယ်ကိုစိတ်ကုန်သွားပြီ။